Maqaal – Nidaamka Calmaaniyadda Qabiilka. | HimiloNetwork
Maqaal – Nidaamka Calmaaniyadda Qabiilka.
Posted by: Zakariya in Faallooyinka September 26, 2017	0 229 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Mar alaaliyo markii waddanka uu gudo-galay marxaladdii burburka, waxaa jab ku yimid oo dowladii la burburay nidaamka lagu xukumo oo dowlad walbo ay qasab ahayd inay ku ilaaliso waddanka. Waxaana uu ahaa kii hore hanti-wadaag oo la isku waafaqsan yahay dhibaatadiisa inay ka badnayd faa’iidadiisa.
Previous: Kaalinta Bukaan-la-roorayaashu ay kaga jiraan gargaarka deg-degga ah.
Next: Mashruuc ila cun aniga oo dadka aan Muslimiinta ahayn lagu fahamsiinayo diinta Islaamka.
Daawo – Nin ay Shimbirihu u daba-ordaan sida Ilmihiisa oo kale.
Kanada oo qaabilaysa tira badan oo qaxooti Siiriyaan ah